“PSB Academy ၏ Open House Info Day ပြုလုပ်မည်” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (၁) ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် ပြောင်းလဲလာသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ်စီးပွားရေးကို ဦးဆောင်ရန် စီးပွားရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်ဆိုင်ရာ များသင်ယူခြင်း.(၂) စင်ကာပူတွင် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို လေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုလျှင် ပိုလီဒီပလိုမာနှင့် ဒီဂရီ ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးသင့်သလဲ၊ ဘာတွေကွာခြားပါသလဲ.(၃)အင်္ဂလန်၊သြစတြေးလျ BE ဘွဲ့တွေ... Read more... မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ယူကေ နှင့် ဥရောပ နိုင်ငံတက္ကသိုလ် ပညာသင်ဆုများ CROWN Education တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင် ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက် International Study Centre UK & Europe 2016 Bursaries and scholarships Myanmar ၂၀၁၆ ခုနှစ် ယူကေ နှင့် ဥရောပနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များ၏ ပညာသင်ဆုများကို CROWN Education တွင် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။လာမည့် ပညာသင်နှစ်အတွက် ယူကေနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ Conventry University, London... Read more... (၁၀)တန်းအောင်များအတွက် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု B.E Civil Engineering ဘွဲ့ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Rangist University တွင် တစ်နှစ်လျှင် ကျောင်းလခ မြန်မာငွေ ကျပ်သိန်း(၅၀) ခန့်ဖြင့် သင်ယူနိုင် ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု B.E Civil Engineering ဘွဲ့ကို ရယူလိုပါက ထိုင်းနိုင်ငံ ၏ Top University တစ်ခုဖြစ်သော Rangsit University တွင် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှ ၁၀ တန်းအောင်မြင်ထားသူများ အနေဖြင့် Foundation (၈) လ + B.E (Civil) ၃ နှစ်ခွဲတက်ရောက်ပြီး B.E (Civil) ဘွဲ့ကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လ... Read more... “မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် စင်ကာပူအစိုးရတက္ကသိုလ် နှင့် ပိုလီနည်း ပညာကျောင်း ၀င်ခွင့်သတင်းအချက်အလက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ” ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (၁) စင်ကာပူ အစိုးရကျောင်း၊ ဂျူနီယာကောလိပ်နှင့် ပိုလီနည်းပညာကျောင်းများ ၀င်ခွင့်ရယူနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ(၂) iGCSE နှင့် Singapore –Cambridge (General Certificate of Education, GCE ‘O’ Level) သင်ယူခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများ(၃) သြစတြေးလျနိုင်ငံ Monash University ၏... Read more... စင်ကာပူ ၂နှစ်- အမေရိကန် ၁ နှစ်ခွဲ ဖြင့် Civil Engineering ဘွဲ့ကို လစာရ အလုပ်သင်(၆) လ၊ Scholarship နှင့်အတူ သင်ယူနိုင်မည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Civil Engineering ဘွဲ့ရယူလိုသူများ အတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံ Nanyang Institute of Management တွင် Diplomain Construction Engineering ကို စာတွေ့ လက်တွေ့ဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Trine University တွင် ဆက်လက် တက်ရောက်ပြီး ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန် Civil Engineering ဘွဲ့ကို ရယူလိုပါက... Read more... "ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟိုတယ်ကြီးများတွင် လုပ်ခရလုပ်ငန်းခွင့်လက်တွေ့ဖြင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်ကို သင်ယူနိုင်မည့် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (၁)ဥရောပ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော ဆွစ်ဇာန်နိုင်ငံ ဟိုတယ်ကြီးများတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဘာသာရပ်ကို လုပ်ခလစာရ လုပ်ငန်းခွင့် လက်တွေ့ သင်ယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေး.(၂)ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းဟိုတယ်ကြီးများတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ.(၃)ပညာအရည်အချင်းအလိုက် Certificate, Diploma, Higher Diploma,... Read more... "မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကောလိပ်တွင် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် တက်ရောက်နိုင်မည်" ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (၁) အမေရိကန်နိုင်ငံ အစည်ကားဆုံးနေရာဖြစ်သော San Francisco နှင့် SiliconValley ရှိ Canada College, College of San Mateo, Skyline College ကောလိပ်များတွင် သင်ကြားနိုင်မည်။(၂) ဆယ်တန်းအောင်ထားသူများနှင့် IELTS 5.5 ရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။(၃) ကျောင်းလခမှာ တစ်နှစ်လျင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅,၃၀၀ ၀န်းကျင်သာရှိသည်။(၄) ကမ္ဘာကျော်... Read more... Pages« first